सानिमा जनरलको आइपिओ ओपनिङ्ग रेञ्ज कति होला ? - Arthasansar
मंगलबार, ०४ कार्तिक २०७७, १२ : ४५ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौँ सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले निष्काशन गरेको साधारण सेयर (आइपिओ) को ओपन रेन्ज कति होला ? आम लगानीकर्ताको मनमा उब्जिएको प्रश्न अहिले छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कम्पनीको पहिलो कारोबार अब छिट्टै हुनेछ ।
असोज २१ गते, बुधबारदेखि असोज २५ गते आइतबारसम्म निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको साधारण शेयर ९आइपीओ० को बाँडफाँड असोज ३० गते, शुक्रबार भएको छ ।
नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रति शेयर न्युनतम १०३ रुपैयाँ ७३ पैसादेखि अधिकतम ३११ रुपैयाँ १९ पै
सा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्ने सम्भावना रहेको छ । नेप्सेले हरेक कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज तोक्ने गर्दछ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो । गोलाप्रथाद्वारा गरिएको बाँडफाँडमा २ लाख ७३ हजार जना आवेदकले १० कित्ता शेयर हात पारेका छन् भने ५ लाख ९० हजार ५ सय ८५ जना आवेदकको हात खाली भएको थियो ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिशेयर नेटवर्थ १०३ रूपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । सोही नेटवर्थको ३ गुणा ३११ रुपैयाँ १९ पैसा हुन्छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण भएको हुनाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नेटवर्थबाट ओपनिङ रेञ्ज तोकिनेछ ।
नेरुडे लघुवित्तले प्राइम बैंकको सेयर लिलामीमा ल्याउँदै